5 Yakanakisa Pikicha Spot MuEurope | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > 5 Yakanakisa Pikicha Spot MuEurope
Maonero nemamiriro ekunze muPetrin Hill park inogadzira imwe ye 5 akanakisa mapikicha muEurope. Sezvineiwo, iri muChidiki Town, Petrin Hill inzvimbo yakasvibira uye inodakadza iyo inotarisisa Prague castle. Petrin anopa maonero akanakisa eruzhinji, uye waigona kukwira kune shongwe yekutarisira ye maonero anoshamisa muguta, nematende, uye mabhiriji.
Petrin Chikomo akakodzera pikiniki muEurope muchirimo, kudonha kana zhizha. The leafage will look kupera simba mukudonha uye muchirimo uye zhizha miti yese nenyika zvichave zvichitumbuka uye zvicheneke mutema. Ingozvibata iwe wega ma scones nemajeriki kubva Zvinyorwa Bakehouse uye imi mese makagadzirirwa pikiniki inoshamisa muPrague.
Bhuronzi pristine mvura uye pamusoro pegomo inoratidzira mune dziva, the views of Lake di Braies in South Tyrol in Italy will color your picnic with beautiful memories. Italy idenga rekumusoro, kubatanidzwa ne Nyanza dzinoshamisa uye makomo, Hazvina kukodzera kunyatsotsanangura pamusoro pezvikonzero zvakawanda nei iri dziva riri pamusoro pedu 5 yakanakisa pikiniki nzvimbo muEurope.
Paris ine zvisingaverengeki mapindu akanaka uye nzvimbo dzepikiniki pamwe neSeine. Nzvimbo yakanaka yepikiniki muParis iri mhiri kwechi iconic Champs de Mars nzvimbo.
Iwo unoshamisa nzvimbo yakasvibira pakati pechinomwe kurongedzerwa uye Eiffel Tower. Iyo yakanakira pikiniki muParis uye inopa zvigaro zvepamusoro zvekuvira kwezuva. Mukuwedzera kune chimiro, zvakare imwe ye 10 akanaka maonero paEiffel Tower muParis.
Nguva imwe neimwe yezhizha mhuri dzeParisian dzinosvika kuzotora zuva kana kunakirwa nemamiriro ekunze kwebindu. Iyo yakanyarara kwazvo uye inopa ino sarudzika mamiriro ekuona iwo Eiffel Tower husiku mwenje.
pano pa Chengetedza Chitima, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvetiketi matikiti kune chero akaisvonaka epikicha nzvimbo pane yedu runyorwa.
Iwe unoda here kubatisa blog yedu yekunyora "5 Best picnic Spot In Europe" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-picnic-spots-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, iwe unowana edu anozivikanwa nzira dzechitima - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Zh-CN to / ja kana / of uye mimwe mitauro.
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Famba Europe